बालबालिकामा घातक बन्दै सेतो पुतली, ४८ घण्टाभित्र उपचार नथाले आँखाको ज्योति नै गुम्ने खतरा ! - Khabar Break
फुर्रफुर्र नाच्दै फूलमा पुतली बसेपछि बालबालिका रमाउँछन् । ‘कति राम्री पुतली’ भन्दै पुतली भएतिर बालबालिका दौडिँदा अभिभावक पनि खुसी हुन्छन् । यद्यपि, सबै पुतली खुसी दिनेखालका हुँदैनन् । चिकित्सकको सुझाव छ, ‘‘सेतो पुतलीसँग सचेत बनौँ ।’’
सेतो पुतलीले यतिबेला नेपाली जनस्वास्थ्यलाई चुनौती दिइरहेको छ । सेतो पुतलीको झुस आँखामा सङ्क्रमण भएको ४८ घण्टाभित्र अस्पतालमा उपचार नथाले आँखाको ज्योति नै गुम्ने खतरा हुन्छ । आँखाको भित्री भागसम्म गएर यसले दृष्टिमा क्षति पु(याउँछ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका आँखा रोग विशेषज्ञ डा। सञ्जीव भट्टराईका अनुसार, मानिसको दृष्टि छिनभरमै नष्ट गर्ने आँखाको खतरनाक रोग हो– सापु । सापु सङ्क्रमण भएपछि आँखामा फुलो परेकोजस्तै बाहिरबाटै टल्केको र नानी पूरै सेतो देखिन्छ ।
नेपाल आँखा अस्पतालका प्रमुख डा। कमलबहादुर खड्काले सेतो पुतलीबाट लाग्ने सापु रोगले जनस्वास्थ्यमा समस्या थपेको बताउनुभयो । पोखरा, स्याङ्जा, गुल्मी, लमजुङ, बाग्लुङलगायत पहाडी जिल्लामा यो रोगको समस्या देखिएको छ ।
उपत्यकामा पनि सापुको जोखिम बढेको र यसको जोखिम भदौदेखि मङ्सिरसम्म रहने उनले बताए । डा। खड्काका अनुसार, सेतो धर्के पुतलीसँग बालबालिका रमाउँछन् । पुतलीसँग खेल्ने, रमाउने र मार्ने क्रममा पुतलीका रौँ आँखामा पर्दा यसको सङ्क्रमण जोखिम बढ्छ ।
बालबालिकामा यो रोग बढी देखिनुका कारण बालबालिकाको पुतलीप्रेम नै रहेको अनुभव उनको छ । सेतो पुतली सेतो बत्तीमा घुम्न बढी रमाउँछ । सेतो पुतलीसँगको संसर्गमा आएका ठूला व्यक्तिलाई पनि सापु लाग्छ ।
आँखाका अन्य रोगभन्दा सापु फरक हुन्छ । यो रोग लाग्दा आँखा रातो हुने, उज्यालोमा हेर्न गाह्रो हुने, आँखाको कालो भागको बीचमा सेतो हँुदै जाने, ज्यादै छोटो समयमा दृष्टि कम हुँदै जानु, आँखा पाकेजस्तो देखिए पनि चिप्रा पटक्कै नआउने नै यसका प्रमुख लक्षण रहेको डा। खड्काको भनाइ छ ।
‘सिजनल हाइपर एक्युट पानुभिआईटिस’ अर्थात् सापु रोग नेपालमा पहिलोपटक २०३२ सालमा पोखराका बालबालिकामा देखिएको थियो । सापु तीव्र गतिमा फैलिएर केही घण्टामै आँखाको भित्री भागसम्म पुग्छ । तत्काल उपचार हुन नसकेमा बिरामीले दृष्टि गुमाउँछ ।
अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा यो रोग प्रत्येक दुई वर्षमा नेपालमा देखिने गरेको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सापुको जोखिम बढेकाले सजग रहन सबैमा आह्वान गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा यलु जोशीले खबर लेखेकी छन् ।
बिहानै चिया पिउनु हुन्छ ? यस्ता छन् असर
कुन समयमा प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल ?
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ६७२ जनामा कोरोना संक्रमण, ४९० संक्रमणमुक्त